Nwelite Gmail ... Ọgwụgwụ kacha mma karịa mgbe | Martech Zone
Ọ bụ ezie na m na-anụ ụtọ Google+ na ịdị mfe nke interface na nnukwu ọrụ, Gmail yiri ka ọ gafere otu nde kilomita elekere n'otu awa na mpaghara ọzọ. Emeghere m email na Gmail n'abalị a ma enweghị m ike ịgụ email:
Ọ bụrụ na ị lelee Gmail anya nke ọma taa, ọ nwere ọtụtụ narị (enweghị ikwubiga okwu ókè) nke ihe nchọgharị na ihuenyo ahụ. Ọ bụ ihe jọgburu onwe ya… ihe niile site na mgbasa ozi gburugburu (n'elu na aka nri), na ịkekọrịta (aka nri aka nri), ịkpọ ndị ọrụ ndị ọzọ (aka ekpe aka ekpe), na ọkwa niile na-ekpuchi ozi m na-achọ ịgụ.
Nke a dị ọcha mgbe ị jiri ya tụnyere ntọala Google:
Nke a bụ ọmarịcha ileba anya na Google Plus:
Obi dị m ụtọ, ọ dị ka ndị folks Gmail ghọtara okwu a na njirimara onye ọrụ ọhụụ na-abịa n'oge na-adịghị anya:
Anaghị m ekwu maka Gmail… ọ bụụrụ ụlọ ọrụ ọ bụla ihe mmụta. Agara m katọrọ ụlọ ọrụ na-ewu ewu na mpaghara n'ihi na ha nwere ihe karịrị 200 maka igodo ụzọ n'ụlọ ha. O mere ka saịtị ahụ ghara iji ya arụ ọrụ. Mgbe m ghọtara na ụlọ ọrụ na-anya isi na ya sitere na ngwaahịa, njirimara, ndị ahịa yana ozi ndị ọzọ… ọ dịghị mkpa ịdekọ ihe niile n'otu ibe saịtị ma ọ bụ ngwa gị.
Nye onye obia ihe omuma banyere ihe ha choro.
Nye nhọrọ maka ndị ọrụ chọrọ imekwu. A na-akpọ nke a 'nkwupụta na-aga n'ihu'. N'aka ozo, nye onye obia ihe zuru oke ka ha nwee ike mezuo ihe ha choro. Ma ọ bụrụ na ọ dị ha mkpa igwu ala karị, nye ụzọ iji mee ka nhọrọ ndị ahụ dị.
Ọ bụghị ihe niile ka bipụtara na saịtị gị. Kwe ka ngwaọrụ, plugins, ụdị, na mgbakwunye ndị ọzọ maka ndị mmadụ wee rịọ arịrịọ ndị ọzọ.
Mee ma ọ dịkarịa ala otu onye na-arụ ọrụ na otu gị ịlụ ọgụ ma na-arụ ụka banyere ihe ndị ọzọ dị n'ime gị chọrọ ka agbakwunye na ibe obibi. Ọ kwesịrị ibu agha! Dabere na nchịkọta iji gosipụta okwu ahụ - obere ga - eme ka ojiji na ntụgharị dị ukwuu.
N'uche m, ọhụụ Gmail ọhụrụ nwere ike ime ka ọ dị mfe karịa… ikekwe ya na njikọ dị elu n'ime igodo karịa bọtịnụ ọ bụla maka mmemme ọ bụla. Ọbụna nke ka mma, kwe ka ndị mmadụ zoo ma gosipụta ihe ndị kacha amasị ha. Agbanyeghị, m na-atụ anya mmelite ahụ, ka m wee nwee ike ịgụ email m ọbụlagodi.
Jul 13, 2011 na 2: 46 AM
Doug, enweghị m ike ichere maka interface ọhụrụ ahụ! Ị dabara nke ọma na nkwuputa gị na ị kwesịrị ịmalite na ngwaahịa ntọala wee mee ka "mmekwalite" na "atụmatụ ndị dị elu" dị mfe maka ndị ọrụ chọrọ ha. Bipute na-eche echiche. Ekwuru m na enweghị m ike ichere maka interface Gmail ọhụrụ? 🙂
Julaị 19, 2011, elekere 12:47 nke ehihie
Enweela m interface ọhụrụ ahụ. Ọ dị n'okpuru Ntọala, Ntọala ozi, Gburugburu, isiokwu nlele. M na ngwa akwụ ụgwọ ka ejighị n'aka ma ọ bụrụ na ọ bụ nhọrọ n'okpuru akwụghị ụgwọ ma ọ bụ na ọ bụghị. Ụzọ ya ka mma. Ịkwesịrị ịlele http://www.rapportive.com